मुम्बईबाट टेम्पोमा आए ४० नेपाली – Lok Sangit Parakhi
Friday, August 14यहालाई स्वागत छ....
मलंगवा : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढ्दै गएको र भारत सरकारले लकडाउन थप्दै गएपछि दैनिक जीवन कष्टकर बनेका ४० नेपाली टेम्पोमै चढेर भारतको मुम्बईबाट नेपाल आइपुगेका छन् । टेम्पो चलाएर गुजारा गर्दै आएका सर्लाहीका कविलासी नगरपालिका र बसबरिया गाउँपालिकाका अटो चालक परिवार मुम्बईबाट टेम्पोमै चढेर घर आइपुगेका हुन् ।
मुम्बईमा संक्रमण बढ्दै गएको र काम बन्द भएपछि आफूहरु टेम्पुमा परिवारसहित घर आएको कविलासी नगरपालिका ८ का रौशनप्रसाद साहले जानकारी दिए । ‘काम बन्द भएपछि दैनिक जीवन कष्टकर बनेको थियो । कामधन्दा बन्द भएपछि पैसाको अभाव भयो । २ महिनासम्म जसोतसो गुजारा चलाइयो । तर, लकडाउन खुल्ने छाँटकाट नदेखिएपछि ४० जना आ–आफ्नो टेम्पो लिएर घर आयौं । मंगलवार बिहान हिडेका थियौं । शनिवार बिहान सोनवर्षा बजारमा आएका थियौं । घर आउन खोज्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोकेर राख्यो’, साहले भने, ‘स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्र नेपाल जान भनेपछि शनिबार दिनभर स्वास्थ्य परीक्षणमै लाग्यो ।’
सबैको स्वास्थ्य अवस्था समान्य रहेको रिपोर्ट देखेपछि बल्ल आफूहरुलाई उनीहरुले छोडेको साहले बताए । मुम्बईबाट लिएर आएको टेम्पोलाई भारतीय क्षेत्रमा नै छोडेर आएको साहले बताए । ‘अवस्था समान्य भए फेरि जान्छु । होइन भने अब नेपालमै बसेर कामधन्दा गर्ने हो। खेतको बाटो हुँदै रातभरिमा हामीहरु आ–आफ्नो गाउँसम्म पुग्न सफल भयौं । सबैजना अहिले क्वारेन्टाइनमा छौं’, उनले भने ।
कविलासी नगरपालिकामा शनिबार रातभरिमा २९ जना आएका छन् । जसमा २ जना महिला र २७ जना पुरुष रहेको स्वास्थ्यशाखा प्रमुख संजय झाले जानकारी दिए । आउनेहरुमा बढी कविलासी नगरपालिका वडा नं. १ पिपरियाका रहेका छन् । सबैलाई अगर्वास्थित विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखेको उनले बताए । स्वास्थ्य परिक्षणको काम हुँदै छ ।
त्यसैगरी बसबरिया गाउँपालिकामा आइतबार बिहानसम्म ११ जना आएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामअयोध्या रायले जानकारी दिएका छन् । आउनेहरु सबै वडा नं. ४ र ५ धनगढा गाउँको रहेको छ । सबैलाई वडा नं. ६ मा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । बिहान आएकाको स्वास्थ्य परीक्षणको काम अहिले हुँदै छ ।
नेपाल आएको देखेपछि सुरक्षाकर्मीले गाउँघरमा जान नदिइ उनीहरुलाई सिधै क्वारेन्टाइनमा लगेर राखेका छन् । समाजलाई जोगाउनका लागि उनीहरुलाई घरपरिवारमा जान नदिइ क्वारेन्टाइनमा पुर्याएको सुरक्षानिकायले जनाएका छन् ।
Prevलकडाउनमा कलाकारको सामूहिक ‘न्युड फोटोग्राफी’
Nextश्रममन्त्री यादवलाई हृदयघात